KACAANKA MAN UNTD: Shaxda uu doonayo inuu fasal-ciyaareedka soo aaddan lasoo shir tago Macallin Ten Hag | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha KACAANKA MAN UNTD: Shaxda uu doonayo inuu fasal-ciyaareedka soo aaddan lasoo shir...
KACAANKA MAN UNTD: Shaxda uu doonayo inuu fasal-ciyaareedka soo aaddan lasoo shir tago Macallin Ten Hag
(Hadalsame) 30 Abriil 2022 – MANCHESTER UNITED ayaa doonaysa inay dhabbe kale qaaddo fasal-ciyaareedka soo aaddan oo loo dhiibayo macallinka dhowaangalka ah balse falsafadda ciyaareed xambaarsan ee Erik ten Hag.
Taageerayaasha kooxdan ayaa la tacaalaya fasal-ciyaareed aan miro badnayn, iyadoo ay isu dhiidhiibayaan kooxaha kale ee ay ku xafiiltamaan woqooyi Galbeed England ee Man City iyo Liverpool – tiiyoo ay u badan tahay inay seegaan CL.
Yeelkeede, waxaa jirta rajo yar oo kasoo bidhaamaysa ili-ku-miriqday, waana in macallinkan Dutch-ka ihi uu gacan ku lahaado in uu calafkooda iyo ciyaartoodaba uu dhanka kale u rogo.
Ten Hag, 52-jir, ayaa dib u dhisaya koox ka tarjumaysa baxaalliga ciyaareed ee uu dheelo oo ah nooca loo yaqaan ”Total Football”, isagoo doonaya inuu waax kasta kusoo kordhiyo laacibiin cusub.
Ten Hag oo ay u badan tahay inuu dabbaqo shaxda ay Dutch-ku inta badan doorbidaan ee 4-3-3 ayaa kooxda Old Trafford kusoo biirin kara xiddigaha ka muuqda shaxda 1-aad ee kooxda camaaliqada ah ee yara ciirtay.
Previous articleRuushka oo lagu eedeeyey inuu dhilay qorshe uu ku weerarayo dal kale intii uu wadey dagaalka Ukraine (Maxaa socda?)
Next articleFALAX GOODDIN: Reer Galbeedka oo ka walaacsan dal ku yaalla qalbiga Yurub oo Ruushka la jira oo soo bandhigay hub culus + Sababta & Sawirro